बिहेपछि मात्रै महिलामा आउने यस्ता अनाैठा परिवर्तन कारण थाहा पाउदा पर्नुहुनेछ अच्चमित ! – PathivaraOnline
Home > रोचक > बिहेपछि मात्रै महिलामा आउने यस्ता अनाैठा परिवर्तन कारण थाहा पाउदा पर्नुहुनेछ अच्चमित !
admin December 15, 2020 रोचक	0
काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा तिब्र गतिको कार प,ल्टियो
छोरी भएर पनि बाबुको इच्छा पुरा गर्दिनस भन्दै, म माथि चढ्नु भयो! यस्तो छ छोरीकाे कारूणिक बयान (भिडियो सहित)
यी कस्ता स्माेकर? कडाउनमा नजिक चुरोट नपाएपछि खोज्दै जाँदा अर्को देश पुगे, हेलिकप्टरबाटै गरियो उद्धार